Firemail: Email Marketing enweghị onye na-enye ọrụ Email | Martech Zone
Abụ m onye na-akwado ndị na-enye ọrụ email na ngwaahịa na ọrụ dị egwu ha na-enye. Ikekwe nke kachasị mkpa bụ nsogbu mwepụta nke nwere ike ibilite mgbe ị na-ezipụ ọtụtụ email. Na nnukwu riff n'etiti Ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) na ndị na-enye ọrụ Email (ESPs), mgbe ụfọdụ azụmahịa na-etinye n'etiti.
O doro anya na, na-arụ ọrụ ya na ESP na ọ bụghị ịnwe ikike ọ bụla nwere ike ibute nsogbu mgbapụta, kwa. Ọtụtụ ndị ISP na-egbochi email naanị n'ihi na ezitere ya site na sava dị iche iche (ESP) karịa ngalaba na adreesị nzaghachi.
Ihe ọzọ bụ na olu email ezitere na-ekpebi ego nke mmemme ahụ na ndị na-enye ọrụ email. Anụla m akụkọ akụkọ egwu nke ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ karịa email karịa ka ọ na-efu iji zipu ozi na post ọfịs. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email na-akwụkwa ụgwọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị gafere oke nkwekọrịta gị.
Yabụ… ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta ngwaọrụ niile nke onye na-eweta ọrụ Email mana zere nnukwu ụgwọ na ihe ọghọm site na iji sava nke gị iji zipu ozi ịntanetị ahụ. Gị nwere ike na Firemail Marketing. Firemail bụ web siri ike dabere na ya, sọftụwia dị ka ngwa Ọrụ nke ga-eweta ozi ịntanetị HTML dị omimi site na gị nkesa.
Firemail nwere ndepụta siri ike nke atụmatụ nke ọtụtụ ESPs enweghị… gụnyere ndebiri, ntinye websaịtị, ozi akpaghị aka, izizi ozi, ozi ezigara, mbubata kọntaktị, ozi na-agbanwe agbanwe, iwepụ akpaka maka ịpụ na ntụgharị, nzaghachi nzacha, nsuso , njikarịcha, ọnụ ọgụgụ, nyocha nkewa, na ọbụna mkpu ma ọ bụrụ na enwere nsogbu.
N'eziokwu, nke a nwere ike ọ gaghị abụ azịza zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-ezipụ ọtụtụ nde ozi ịntanetị otu ọnwa; n'agbanyeghị, maka $ 15 otu ọnwa… ịnweghị ike iti ya. Maka $ 180 kwa ọnwa, enweghị oke ike ole email ị nwere ike iji sistemụ ziga. Azụmahịa dị oke oke nwere ike ịgbazite onye ndụmọdụ mgbapụta (mee ka m mara ma ịchọrọ otu - otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma bụ ezigbo enyi m) na mgbakwunye na ọrụ ahụ ma nwee ike ịnweta ọtụtụ ihe ESP na-enye na obere akụkụ nke ụgwọ .
Special ekele Dan DeGreef si Otu ndi ahia maka ịtọ m ọdụ na akaụntụ nnwale iji lelee sistemụ ahụ. Ọ bụrụ n’ikpebie iburu Firemail maka nnwale nnwale n'efu, gbaa mbọ gwa Dan na ị nụrụ ya ebe a.
Tags: blackberry ngwaọrụhashtags facebookisa isaemail na-anabatalaghachi na ntinye ego ahiatagboduụlọ ọrụ
Ndị Kachasị Mkpa Ndị Ahịa Ga-amụta